Semalt Expert: Inona no Tokony ho Fantatrao Momba Ny Fitadiavan-tranonkala?
Mitady ny votoaty hitady azy amin'ny Internet ny moterra. SEO vita vita fitaovana webdia mora hita. Ny famoronana ny sarin'ny tranonkalan'ny XML dia ahafahana mandefa ny tranokalan'ny tranonkala, na izany aza dia mitaky fampiharana SEO izay mampiasa tranonkalany fanasiana mba hanomezana ny fisian'ny fampahalalana voatonona - buy driving licence online.
Ny manam-pahaizana Semalt Tolotra nomerika, Frank Abagnale dia manazava ireo lafiny izay tsy maintsy fantatrao momba ilay tranokala mitsambikina.
Fantaro ny votoatin'ilay tranonkala
Ny fandefasana an'i Google dia manara-maso akaiky ny vokatra sy ny vaovaomametraka tranokala. Ny endriky ny vokatra dia tokony aseho araky ny endrika noforonina raha tokony ho ny endriky ny pejytsy mifanaraka amin'ny fanodikodinam-bola, famoronana vaovao na fampidirana pejy tsy nomanina.
Mety ho voasakana ny fanakanana
Ireto ny mari-pandrefesana diso izay tsy nahitana ny ampahany sasany tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ankapobenyMety hitranga ny fikarohana noho ny tsy fahaizan'ny mpiloka hamita ny fidirana. Ny olan'ny SEO sasany dia mety hanova endrika ny endrika na fanovanaLohatenin'ny URL sy ny sivana tsy hita ao amin'ny pejy notadiavina. Ny fanamarinana ny robots.txt na ny Noindex manerantany dia afaka manampy amin'ny famahana ny fanakanana ny fikomiana.
Fahatakarana ny URL tsy ankanavaka
Na dia eo aza ny SEO marina dia mety ho ny sasany amin'ireo URL dia mety hesorina noho ny robots.txt. Learning whatIreo traikefa azo tsapain-tanana dia manome fahafahana ny manavaka ireo sakana sy fanirian-tsofin'ny mpangalatra..
Fantaro ny hadisoana 404
Mety hitranga ny fiverimberina fahadisoana 404 satria tsy ampy ny fikarohanaNy motera hiditra na ny tranonkala dia tsy voasivana noho ny tsy nijanonana. Mpanjifa iray mikendry ny hampitombo ny fahaizan'izy ireo amin'ny Internet amin'ny alalan'nyNy SEO dia tokony handinika sy hahatakatra ny antony ao ambadiky ny hafatra diso raha toa ka mila famahaola izy ireo.
Fantaro ireo fanodinana
Ilaina ny fampahafantarana ny mpiloka sy ny fomba amantarana ny fanodinana azyNy lahatahiry fanovana alohan'ny fikarohana finday dia mahita pejy tena ilaina. Ny famerenana ny fanovana 302 mankany 301 dia ahafahana miala amin'ny 15 taonaisan-jato amin'ny fifindrana mankany amin'ny pejy farany.
Fantaro ny antontam-baovao malemy
Mpanazava fitaovam-piadiana tsara tarehy ahafantarana ireo fampahalalana tsy dia tsarailay tranonkala. Mijery azy ireo raha toa ka duplicate ny pejy na misy rakitra meta diso izay mandà ny laharan'ny pejy na dia amin'ny SEO azaHetsika avy amin'ny robots Noindex.
Fandalinana ny teny kanônika
Ny fampidirana vao haingana ny tenifototra kanonika dia azo adika amin'ny votoaty duplicating,raha diso ampiharina. Ny famakafakana ny votoatiny manan-danja amin'ny famahanana amin'ny alalan'ny fampiasana crawlers dia manala ny votoaty duplicated.
Find daty manokana
Ny fampiharana ny RegEx na XPath ankoatra ireo mpitsikilo dia afaka manome famantaranaendritsoratra ary ny ampahany XML amin'ny rakitra amin'ny alalan'ny motera fikarohana. Ity ampahany amin'ny sehatra SEO ity dia miteny amin'ny mpikirakira mba haka fototraIreo singa ao amin'ny pejy toy ny vidin-tsolika, ny rafitra momba ny angon-drakitra, ary ny sary amin'ny votoatiny.
Ampiasao ny fanadihadiana
Maro ny mpilalao mampiasa ny Google Search Console sy ny fitaovana Google Analyticmba hanomezana fanazavana ho an'ny pejy rehetra. Izany dia manamora ny fanatsarana ny pejy notadiavina sy ny fanomezana ny angon-drakitra ilaina mba hametrahana nyilaina ny mombamomba ny sari-tany.
Miankina amin'ny karazana tranonkala ny vokatra tsara indrindra avy amin'ny mpitsikilo sy ny SEO,ary natolotra ny votoaty. Ny fanondroana ny fitaovana fitifirana sahaza dia dingana voalohany amin'ny fanatrehana ny fisianà aterineto izay manana antokafahombiazana. Ny fitadiavana ny antony manokana amin'ny fampahalalam-baovao tsy voatanisa amin'ny alàlan'ny fanadihadiana dia ahafahana manova fomba iray hamahana ny olana.